Maurk U – အေဒီ ၁၄ ရာစုခေတ်က ရခိုင့်ရှေးဟောင်း မြောက်ဦးမြို့ တော် ဘယ်လဲ ဘာလဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒီကြိုးစားမှုဟာ “ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေး” တနည်းအားဖြင့် “ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး” ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ရဲရဲကြီး ပြောရဲပါတယ် ။
မောင်ပျာလောင် on May 12, 2012 at 5:09 am
န၀တ အစိုးရခေတ်က ပုဂံကို ပြုပြင်ထာထက်၊ ဖျက်ဆီးတာပိုများပါတယ်။
မျှော်စဉ်အသစ်ကြီးတွေဆောက် ပြီးကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေဆီက ဒေါ်လာတွေကောက်ယူတာ ပုဂံကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရှေးနှစ်ပေါင်း ၉၀၀ ~ ၈၀၀ရာကျော်ကတရုတ်ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေမှာရေးထားတဲ့ ရွှေမြို့တော်ကြီးပုဂံ
ရဲ့ Sky-line ဟာ အခုတော့ပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ နတ်ကတော်တွေအခါပေးပြီး
ပြုပြင်လိုက်တဲ့ ပုဂံဘုရားတွေ မူလလက်ရာပြက်ပြီး၊ အမယ်အိုကြီး သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ရင်ခွဲဇာဘော်လိကြီး ၀တ်ထားသလို ခံစားမိပါတယ်။ ရခိုင်သားများ န၀တ ရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကို နမူနာယူသင့်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဒေါက်တာ သန်းထွန်းက ပြောဘူးပါတယ်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး မလုပ်တပ်ရင် မြန်မာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေဟာ သူ့ ဟာသူ မြေကြီးအောက်မှာနေတာ
ကောင်းတယ်တဲ့ (တခါက ပျူသင်ချိုင်းကို ချင်းအမျိုးသားရွာဆိုပြီး ရှေးပုတီးလယ်ဆွဲတွေတူးဖေါ်ပြီး လမ်းဘေးမှာ ရောင်းစားဘူးတာကို ဆရာ သန်းထွန်း ရင်ထုမနာသံနဲ့ ပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားပါ)။
Than Koe Maung on May 12, 2012 at 12:05 pm
ကြေးမုံသတင်စာကပြောတဲ့ ဗမာစစ်အစိုးရရဲ့ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်–
Saw Hla Khine (ArReYanSaw) on May 12, 2012 at 1:47 pm
We will not never forget burma goverment so long as the world exist. we have deeply feeling.we want to be free under the burma goverment colony. we love our ancient city and adore. Don’t destroy again anymore. we are always refusing over and over again that we will not never surrender.Rakhine is King Tharkyi generation.Nobel people in the world.
အာရီယန်နွယ် on May 14, 2012 at 10:33 am
ဗမဖက်ဆစ်အစိုးရတွေဟာ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အားလုံးကို မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း
ချပြီး ဖျက်ဆီးလာတာဟာ ခုဆိုရင် ရခိုင်ရှေးဟောင်းမြို့တွေ၊ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေဟာ
မရှိတော့သလောက် ပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီ။လူမျိုးတမျိုး၏ သမိုင်းကို အခိုင်အမာသက်သေပြနှိင်တာက
ဒီလို ရှေးဟောင်းဗိသုကာလက်ရာတွေပါ။ဒီဟာတွေမရှိတော့ရင် ရခိုင်သမိုင်းသည်လည်း
ယဉ်ကျေးမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားရင် ရခိုင်လူမျိုးသည်လည်း မကြာခင်ပျောက်ကွယ်သွား
နှိုင်သည်။ဒီဗမာဖက်ဆစ်တွေဟာ ရခိုင်လူမျိုးကို မျိုးတုန်းသွားစေရန်အတွက် လူမျိုးရေးအရသွေးနှောခြင်း၊
လုပ်နေသည်မှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဗမာလူမျိုးတွေဟာပုဂံအကြောင်းတွေကို စာတပေါင်
ပေတဖွဲ့နဲ့ ၀ါကြွားကာရေးသားနေကြပေမယ့် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏သမိုင်းအမွေတွေကို ပြိုင်ဖက်လို
သဘောထားကာလိုက်ဖျက်ဆီးနေတာသည် အလွန်တရာမှ အောက်တန်းကျသောလူမဆန်သော
လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ဘုရားချင်းတူတာတောင် သူတို့ဘုရားသာဘုရား။ရခိုင်ပြည်ကဘုရားကဘုရားမဟုတ်သလို မြေတူးစက်တွေဖြင့်ဖြိုဖျက်လိုက်ကြသည်။ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို မလုပ်နဲ့မဟုတ်ပါ။လုပ်ကြပါ။သို့သောဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်တဲ့အခါ ရခိုင်မြို့ဟောင်းတွေ ပျက်စီးသွားမည့်နေရာတွေကိုမှ ကွက်ပြီးရွေးဖောက်တာကတော့ တော်တော်
မိုက်ရိုင်းတာပဲ။ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ကိုလိုနီလိုသဘောထားပြီး သမိုင်းအမွေတွေကို တခုမကျန်
ဖျက်ဆီးပစ်နေတာဟာ ဂျပန်ဖက်ဆစ်ဝါဒထက်တောင်ဆိုးလွန်းပါသည်။တဖက်က ပုဂံဘုရားတွေကို
တန်ဖိုးထားသလောက် ရခိုင်ရှေးဟောင်းတွေကို အဆင့်မရှိသော ရထားလမ်းကို ဗန်းပြကာ
ဖျက်ဆီးပစ်နေတာဟာ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို တိုက်ရိုက်စော်ကားနေခြင်းသာဖြစ်သည်။
ရခိုင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ခုချိန်မှာ ပိုပြီးညီညွတ်သင့်ပြီ။နယ်ချဲ့တွေကို တော်လှန်ဖို့ ရခိုင်ပြည်သူတရပ်လုံး ပါဝင်သင့်ပြီ။ရထားလမ်းကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်ရှေးဟောင်းတွေက
ခံတပ်၊စင်းကြန်၊မြို့ရိုး၊တံတိုင်း၊စေတီပုထိုး၊ပိဋကတိုက်စသည်ဖြင့် အစားထိုးမရသော ရခိုင့်ရှေးဟောင်း
အမွေအနှစ်တွေ ပါသွားခဲ့ပြီးပြီ။နောက်ထပ် ဘာထပ်ဖျက်ဦးမလဲမသိ။ရခိုင်သားတိုင်း ရခိုင်ပြည်ကိုချစ်ရင်
နယ်ချဲ့ဗမာတွေကို ရခိုင်နိုင်ငံ၊ရခိုင်ပြည်ကနေ မောင်းထုတ်သင့်ပြီ။